संग ExactSpy-Track Contact Cell Phone Remotely तपाईं कुनै पनि Android मा सबै फोन पुस्तक प्रविष्टिहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, iPhone लक्ष्य फोन.
लक्ष्य फोन मा सबै फोन पुस्तक प्रविष्टिहरू हेर्नुहोस्
कुनै पनि सम्पर्क संग सम्बन्धित सबै नाम र संख्या हेर्नुहोस्
सबै संपर्क आफ्नो वेब खाता गाडीको मा अपलोड
आज संसारमा मा, यो आफ्नो बच्चाहरु संग बाहिर झुन्डिएको गर्ने वा आफ्नो कर्मचारीहरु संग बैठक छन् जसलाई भरोसा गर्न आउँदा तपाईं अतिरिक्त सावधानी अपनाउनु पर्छ. ExactSpy-Track Contact Cell Phone Remotely तपाईं प्रयोगकर्ताको उपकरणमा कुनै पनि संदिग्ध सम्पर्क प्रविष्टि को लागि स्क्रीन गर्न अनुमति गरेर चालकको सीट मा फिर्ता तपाईं हाल्छ.
फोन पुस्तकमा राख्दा पहुँच तपाईं आफ्नो लक्ष्य प्रयोगकर्ता सम्पर्क छ जो वास्तव थाह पाउँछौं. आफ्नो लक्ष्य मान्छे संग कुराकानी तिनीहरूले हुनु हुँदैन? एउटै फोन नम्बर अहिले अर्कै नाम अन्तर्गत देखा गर्नुहुन्छ? ExactSpy तपाईं सबै नाम र संख्या हेर्नका लागि अनुमति, र तपाईं आफैलाई मामला मा सिर्फ तिमीलाई कहिल्यै यो आवश्यकता यस संपर्क जानकारी छ छौँ.
एक अनलाइन ठेगाना पुस्तक लागि समान, ExactSpy के तपाईं बढ्न चाहन्छौं मानिसहरूलाई सजिलो पहुँच दिन्छ. सबै आफ्नो सम्पर्कहरू (ठेगाना पुस्तक) यहाँ भण्डारण गरिन्छन्. लक्ष्य यन्त्रहरू सम्पर्कहरू 'जानकारी पहुँच र हेर्न आफ्नो नियन्त्रणमा प्यानलको माथि बायाँ कुना मा सम्पर्क इतिहास क्लिक.
तपाईं किन उपयोगी यो सुविधा पाउनुहुनेछ?
यो ExactSpy सफ्टवेयर चुपके मोड मा काम गर्दछ, जो आफ्नो फोन प्रयोग व्यक्ति थाह नभएमा सफ्टवेयर स्थापित गर्नुभएको अर्थ, तिनले यो पत्ता लगाउन सक्षम हुने छैन. तथापि, गोपनीयता नियम तपाईं यस अनुप्रयोग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कसरी असर गर्न सक्छ भन्ने कुरा मनमा राख्न, त्यसैले तपाईं पहिलो स्थानीय र संघीय कानुन सन्दर्भमा एक वकील संग परामर्श पक्का हुन.
ExactSpy तपाईं यस आवेदन उपयोग गर्दै छन् कुनै प्रश्न वा चिन्ता उत्पन्न भए उत्कृष्ट समर्थन विकल्प प्रदान गर्दछ. The ExactSpy website hasauser guide with instructions on how to use the tools and features in this phone tracker application. वेबसाइट पनि एक विस्तृत सोधिने खण्ड छ. यो मोबाइल अनुगमन आवेदन इमेल छ, टेलिफोन र जीवित च्याट समर्थन.
← ट्रैक सेल फोन ब्राउजिङ इतिहास
→ प्रमुख लकडहारा